Ndeupi musiyano uripo pakati pePsychic neClairvoyant - Vachishandisa
iphone 6 haizobhadharise
iphone 6 inogonesa wifi kufona
maitiro ekuisa maapplication muarufabheti
ipad mini haina kuvhura
iphone yangu inosangana newifi asi haina internet
Ndeupi musiyano uripo pakati pepfungwa uye yakajeka?
What Is Difference Between Psychic
Ndeupi musiyano uripo pakati pepfungwa uye yakajeka? .Paunenge uchitsvaga vanopa mazano pakunamata , zvakakosha kuti unzwisise kuti mutsauko uripakati pe n'anga uye a clairvoyant .
Zvese clairvoyant anazvo kugona kwepfungwa , asi kwete mweya yese ine chinzvimbo chekuve a clairvoyant . Iyo yakajeka inogona kufambisa kubatana pakati pevanhu vari pasi nemweya kune rimwe divi .
Isu tinowanzo tora iwo mubvunzo wekuti musiyano uripi pakati pepfungwa nepakati. Vanhu vanoda kuziva kuti vangatendeukira kunaani nemimwe mibvunzo. Pano isu ticha tsanangura musiyano uripakati nepiki iwe uye toratidza kuti ndeipi mibvunzo yaunogona kutendeukira kwavari.
Izwi rekuti clairvoyant uye masvikiro anowanzo shandiswa zvakasiyana. Izvi zvinonzwisisika nekuti clairvoyance chipo chakajairika chepfungwa. Clairvoyance chipo chakajairika, izvo zvinoreva kuti anonamira anoona zviratidzo. Iyo yakajeka inogona kuona mifananidzo mune nzira yekuwedzera .
Mifananidzo iyo inoonekwa yakajeka ndeyezviitiko zvinoitika mune imwe nzvimbo uye pane imwe nguva. Izvo zviitiko zvinogona kuitika mune zvakapfuura, zviripo kana mune ramangwana.
Iwe unogona kuenda kune clairvoyant nemibvunzo yakawanda yakasiyana. Mibvunzo mundima yerudo, mhuri, basa kana mari, semuenzaniso. Ivo vanogona kuwana mameseji kubva apfuura, aripo kana mune ramangwana.
Iyo psychic kazhinji ine akasiyana epfungwa kugona. Clairvoyance muenzaniso weizvi, asi clairvoyant zvipo zvinowanika kune wepfungwa. Iyo psychic inogona kuve nechimwe chezvipo izvi, asi zvakare musanganiswa weakawanda mibairo. Izwi rekuti psychic saka rinonyanyo shandiswa semburera izwi.
N'anga inogona kukubatsira munzira dzakasiyana siyana, zvichienderana nezvipo zvaainazvo. Iwe unogona kazhinji kubvunza yakawanda yemhando dzakasiyana dzemibvunzo. Uye zvakare, varapi vepfungwa vanokwanisa kushandisa akasiyana siyana mukuverenga kwavo, senge tarot makadhi, ngirozi makadhi, shuttle, nezvimwe.
Kunze kwezvipo zvakajairika, svikiro zvakare rine mukana wekubatana nezvimwe zvinhu zvakaita sevakafa vanhu (uye dzimwe nguva mhuka), ngirozi, madhimoni, nezvimwe. Izwi rekuti svikiro, naizvozvo, rinomiririra munhu wekutaurirana. Masvikiro anogona kuwana manzwiro, mifananidzo, mitsara, mazwi kubva kumidzimu. Ivo vanokwanisa kupfuudza izvi kune iye munhu kwavakaitirwa ivo kana kune wavanotaura kwaari.
Pamusoro pechipo chekutaurirana nevanhu vakafa, svikiro rinogona zvakare kunge riine zvimwe zvakajairika zvipo. Izvi zvinowanzo kuve musanganiswa. Semuenzaniso, masvikiro anogona zvakare kuve akajeka, akajeka-anoona, akajeka-anoona, kana akajeka-musoro.
Unogona kuenda kusvikiro uine mibvunzo nezve uye kune vako vakafa vadiwa. Mamwe masvikiro anogona kunyange kusangana neako akafa chipfuwo.
Svikiro remweya kana rinoonekera rinoshanda sei?
Vanhu vazhinji vanobvunza munhu ane chipo chemweya kuti vawane njere mune izvo zvichauya mune ramangwana, asi izvi zvinoshanda sei? Izvo zvakaoma kutsanangura yechitanhatu pfungwa, uye izvi hazvina kuratidzwa nesainzi futi. Tsananguro ipfupi inobatsira kuwana nzwisiso yekuti masvikiro, masvikiro nevamwe vanogadzira magetsi vanoshanda sei.
Kana iwe uri kufunga nezve kubhadharwa kubvunzana nehunyanzvi lightworker, zvakanaka kutanga watarisa kana uyu munhu akakodzerawo kukubatsira. Nedzimwe nhungamiro, zviri nyore kuti usarasike muhuwandu hwemasvikiro, masvikiro, masvikiro uye vafemberi.
Pakati kana psychic
Ose ane pfungwa yechitanhatu uye anogona kutora simba revamwe vanhu. Kuziviswa kwacho pane chiitiko cheumwe zvichienderana neanopaira uye anogona kutosiyana pakubvunzana. Musiyano mukuru ndewekuti svikiro rinobvumirana nesimba revanhu vapenyu kana mhuka uye kuti svikiro rinogona zvakare kutora simba remufi. Ona kana mumwe munhu achizvitsanangura sevapakati kana svikiro vasati vapinda mukubvunzana. Kuziva kuti ndiani akanakira chikumbiro chako cherubatsiro kunogona kuchengetedza yakawanda nguva nemari.
Iwe unoshuva here kubvunza mumwe mubvunzo kumunhu akafa, kana iwe une mweya mumba mako? Ipapo zvakanakisa kubvunza svikiro. Ndiyo nzvimbo yavo. Zvakare, bvunza kana ivo vane ruzivo nedambudziko rako. Semuenzaniso, haazi ese masvikiro anogona kuchenesa imba.
Kana iwe uchida kuziva kuti hunhu hwemunhu mupenyu munharaunda yako hunobva kupi kana izvo zvaunonetsekana nazvo zvausingazive, saka unofanirwa kubvunza kun'anga. Mamwe masvikiro anogona kungopinda mumunhu mupenyu uye nekudaro anoita basa repfungwa.
Clairvoyant, yakajeka-yakajeka uye yakajeka-inoona
Mumwe munhu anozvitsanangura semunhu anonzwa zvakajeka anoshanda zvakanyanya nekuona maonero evamwe. Iye munhu anotora pamusoro kunge anga ari manzwiro emunhu iye / iye waari kuyedza kuwana ruzivo nezvake.
Clairvoyants, kune rimwe divi, kazhinji vanowana mifananidzo kuburikidza. Izvi zvinogona kuitwa nenzira mbiri: chiratidzo, kana mufananidzo wechimwe chinhu chiri mune imwe nzvimbo kana nguva. Izvo zvinogona kuve zvisina kujeka kana kupinza. Svikiro rinogonawo kuona mufi seizvi.
Zviri pachena kunzwa vanhu vanowana anonyanya kutaurwa mazwi. Masvikiro anokwanisa kuteerera kumagwara avo nemweya anonzi akachena-kunzwa. Dzimwe nguva pfungwa dzevamwe dzinogonawo kunzwisiswa sekutaura. Saka kuverenga pfungwa kunogona kuve chimiro chekunzwa kwakajeka.
Mushandi wechiedza anogona kuve nemusanganiswa wepfungwa dzechitanhatu. Semuenzaniso, munhu anogona kuve akajeka-kuona uye akajeka-anoona, asi haakwanise kuwana mifananidzo. Mamwe masvikiro nemashiripiti vese vane pfungwa dzechitanhatu uye nekudaro vanowana zvese kuburikidza nerudzi rwemufirimu nezwi, mufananidzo uye manzwiro.
Vamwe vanoshanda magetsi vanoshandisa maturusi ekutsigira chipo chavo. Aya anogona kunge ari makadhi, pendulum, kristaro mabhora, tsvimbo yekushopera, mashizha eti, kuverenga chanza, kumhanya, Zvinenge zvese, kunyangwe matumbu emhuka, akashandiswa senzira yekuparadzanisa kwemazana emakore. Chinhu chipi chinoshandiswa panguva yekubvunzana kwako hachina kukosha.
Ichokwadi ndechekuti nzira dzekukamura dzinoshanda senge yekuwedzera rutsigiro mukuunza uye ndiyo inotungamira yeiyi njere, asi mune zvimwe zviitiko zvakare haifadze. Muchokwadi, ivo vanongova dudziro yezvinoitwa nemashiripiti kana wepakati nepfungwa yavo yechitanhatu, kana zvakadaro zvazvinofanira kuva.
Ziva kuti pane zvekare vanobiridzira , uyo waunogona kudaidza zvakachengeteka vaverengi vemakadhi panzvimbo yemakadhi. Neche tarot, semuenzaniso, kadhi rega rega rine zvarinoreva uye rinotaura chikamu chenyaya, asi iko kududzirwa kweizvi munyaya yako ndiko kunoona kukosha kwekubvunzana. Kana iwe ukawana kunzwa kwekuti iwe urikudzidza zvakawanda nezve iyo tarot pane nezvako iwe, ipapo unogona kutora mhedziso dzako kubva kwazviri.
Vafemberi kana vafemberi vanhu vanofembera ramangwana. Chokwadi ndechekuti vamwe vanhu vanogona kuona zvine simba kwazvo zvekuti vanokwanisa kuona maitiro emangwana kana mikana kana kuvaona muzviratidzo, asi izvi hazvimbove nechokwadi. Muchidimbu: fungidziro dzeramangwana dzinofanira kugara dzichitorwa nezviyo zvemunyu. Ramangwana harigone kufungidzirwa.
Kana chipangamazano akavimbisa iwe mutema nemuchena kuti chimwe chinhu chichaitika, unowanzova mukana wekubheja, asi iwe zvakare uchaona kuti kana ukabvunza vafemberi gumi, unogona kuwana fungidziro gumi dzakasiyana.
Naizvozvo, funga zvekufembera kwete sevaraidzo pane sekutungamira chaiko. Masvikiro akarongeka uye mashiripiti haazombo fungidzira ramangwana mune dema nechena uye zvakare kujekesa kuti chero nzira yekuuka inongoda kupa nzwisiso uye kuongorora mikana, asi isingazombove nechokwadi. Nenzira, kufungidzira ramangwana zvinorambidzwa zviri pamutemo mune dzimwe nzvimbo.
Ndeipi mibvunzo ingabvunzwe nemunhu?
Vanhu vazhinji vanobvunza mibvunzo nezve mumwe munhu. Munhu iyeye anofungei nezvangu? Ndiwo mubvunzo kubvunza a chipangamazano pakunamata ? Iwe unogona kuzvibvunza iwe kana izvi zvinogara zvine hunhu. Kana iwe usina mubvunzo wakajeka, haungawane mhinduro yakajeka zvakare. Vanhu vazhinji vanobvunza mibvunzo isiri iyo uye havanzwisisi. Kana iwe uchibhadhara kubvunzurudza, gadzirira zvakanaka uye bvunza mibvunzo ine mhinduro dzinogona kutungamira mukunzwisisa mamiriro ako.
Kutaurirana nesvikiro kana psychic hakuna kukosha kwepamutemo chero. Semuenzaniso, iwe unogona kufunga kuti mumwe wako ari kukubiridzira. Chipangamazano wezvemweya anogona kuisa uye kusimbisa izvozvo, asi hazvipe humbowo hwepamutemo hwaunogona kushandisa panguva yekurambana.
Vanopa rubatsiro pamweya havabvumidzwe kuti vataure nezvemibvunzo yekurapa uye kwete kuti vaongororwe. Vanachiremba chete ndivo vanobvumirwa izvi. Mushandi wechiedza chaiye anozokuendesa kuna chiremba kune izvi zvinhu zvezvinhu. Kubvunza kunokosha chete kana iwe uchida kuona iyo yakawedzera kukosha yekuwana nzwisiso padambudziko rako uye uchida kuzvigadzirisa iwe pachako zvichibva pane izvo nzwisiso.
Vanhu vazhinji dzimwe nguva vanove vanovimba nezvakafanotaurwa nemasvikiro nemashiripiti uye havatarise yavo pachezvayo. Semuenzaniso, mumwe munhu anga asingashandi kwechinguva anobvunza svikiro kana iye achawana basa. Svikiro rinotaura kuti kune basa rakanaka mukati megore. Munhu uyu anomira kunyorera uye anomirira iro basa. Gore rinopfuura, uye munhu iyeye akatsamwa nesvikiro nekuti iro basa harina kuuya.
Ikozve kune iyo yesainzi yakasimbiswa yekuzvizadzisa chiporofita icho chauri kuzorarama zvinoenderana nezano repakati. Semuenzaniso, mumwe munhu anga asina kuroora kwekanguva uye akarasikirwa nekutenda kwake murudo anoudzwa nesvikiro kuti mudiwa ane rudo achazobuda uye munhu uyu anozvitenda nekusaziva uye achasangana nemumwe munhu zvakare painodzvanya. Kubvunza kunogona, saka, kuve kwakanaka uye kuve nemhedzisiro inofadza.
Vanhu vanogona zvakare kupokana nezano repakati. Semuenzaniso, svikiro rinokurudzira kusatenga imwe imba. Mutengi haatereri uye achiri kuteerera. Munhu uyu anozoenda kunogara mairi, uye nekukasira kuremara kwakawanda kwakavanzika kunobuda, uko svikiro rakayambira nezvaro.
Mune mamwe mazwi, gara uchishandisa yako yakajairika njere uye tora zvako mabasa. Kana iwe uchinyatsoda kuziva rako ramangwana, saka iwe unofanirwa, kutanga kwezvose, uzive kuti iwe une yakanyanya kuzvidzora pane iwe pachako kupfuura zvaunofunga. Kubvunzana pamweya, saka, kunokosha chete kana iwe uchida kunzwisisa kwekutarisira ramangwana rako. Hapana munhu anogona kufanotaura izvozvo kwauri.